Hiiraan Online News About Somalia » Xidiga Reer Baraaziil oo Murug aad u xun Soo waajahday ka dib markii laga badiyay Cayaartii Koobka aduunka..
Xidiga Reer Baraaziil oo Murug aad u xun Soo waajahday ka dib markii laga badiyay Cayaartii Koobka aduunka..
Xidiga xulka qaranka Brazil iyo kooxda PSG ee Neymar Jr ayaa murugo wayn ka muujiyay guuldaradii xulkiisa Selecao ay kala kulmeen koobk aduunka ee kulankii ay Belgium ugu soo baxeen afar dhamaadka koobka aduunka. Neymar Jr ayaa fariin uu murugadiisa ku muujiyay soo dhigay bartiisa Instagram wuxuuna shaki galiyay haddiiba ay suurtogal noqon doonto in uu awoodiisii ciyaareed la soo laaban doono.
Neymar Jr ayaa sheegay in ay noqotay maalintii noloshiisa oo dhan ugu murugada badnayd wuxuuna xusay sidii ay u doonayeen in ay taariikh sameeyeen iyo qaabka xun ee ay koobka aduunka uga hadheen.
Neymar Jr ayaa fariintiisa ku bilaabay: “Anigu idiinma sheegi karo in kani yahay waqtigii ugu murugada badnaa waayahayga ciyaareed, xanuunku waa mid wayn, sababtoo ah waxaynu ognahay in aanu in fog sii socon karnay”.
Xidiga ree Brazil oo qoraalkiisa sii wata ayaa yidhi: ” Waxaynu ogahayn in aanu haysanay waxa ay u baahan tahay in lagu gaadho meel ka sii fog si aanu taariikh u samaynayo, laakiin may noqon waqtigan”. Ayuu Neymar Jr oo murugadiisa qarsan kari waayay Instagram ku soo qoray.